IZINDABA - Amahlubi Nation
SPHAMANDLA GUMEDE UMQEQESHI weqembu lesizwe laseZambia uMilutin ‘Micho’ Sredojevic, usola i-Orlando Pirates ngakubize ngokungaphathi kahle abadlali basemazweni angaphandle. UMicho, osule njengomqeqeshi wePirates ngo-Agasti 2019, uthe abadlali basemazweni angaphandle bakhishwa inyumbazane kuleli qembu laseSoweto. “Eminyakeni emibili engiyihlaleRead More
MINENHLE ZWANE Indoni yamanzi enguNandi Mnguni, oseziphendlele indlela eya kowamanqamu kowozime, owaziwa ngokuthi uMiss SA Teen, uthi ufisa ukuqhakambisa ibala lakhe njengoba akhula ontanga bakhe bemchukuluza ngalo. Le ndoni edabuka eMtubatuba eneminyaka eyi-14 iqala ngqa ukungena kuloRead More
PHUMELELE NXUMALO USOLWE ngokukhetha iphela emasini uNgqongqoshe weMidlalo, ubuCiko naMasiko uMnuz Nathi Mthethwa ngokuphendula umbhalo womethuli wezinhlelo nosomabhizinisi uBonang Matheba kuTwitter. UMthethwa uhlangabezane nale mbibizane ngemuva kokuphendula umbhalo ofakwe nguuBonang ekhasini lakhe likaTwitter evumelana no@mpumz_n ofakeRead More
SPHAMANDLA GUMEDE AmaZulu FC agcine emkhombe indlela umqeqeshi obesenuka nyama nambana kubalandeli beqembu, uJozef Vukisic odabuka eSlovakia. Usuthu Olumabheshankone lunikeze lo mqeqeshi ikhefu elisiyipesheli ngoMashi nonyaka, kwaqokwa u-Ayanda ‘Cobra’ Dlamini njengebamba lo mqeqeshi. UDlamini usizwa uMoeneebRead More
Umlando kaMnuz Jeff Radebe wamaHlubi
UMHLONISHWA uJeff Radebe uneziqu ze-B.Juris aziphothula e-University of Zululand ngo-1976. Uneziqu ze-LLM in International Law aziphothula eLeipzig University ngo-1981 kanti uphinde wafunda naseLenin International School, eMoscow, eRussia, ngo-1985. UMnuz Radebe ube yisishoshivu sezitshudeni ngesikhathi ejoyina izinhlakaRead More
Mthunzi, President & CEO of TZoro IBC, the first African IOE Vice-President to the ILO,Global Spokesperson for Employers in almost a 100 years of the ILO’s existence, and consequently Vice-Chairman of the Governing Body. The IOERead More
Mr Radebe holds a B.Juris degree from the University of Zululand obtained in 1976; LLM in International Law from Leipzig University obtained in 1981 and studied at the Lenin International School, Moscow in 1985. Mr RadebeRead More
SIMANGALISO NTSHANGASE OWAYEYINJINI yezinkunzi zase-Italy, iJuventus u-Andre Pirlo usemenyezelwe njengomqeqeshi omusha waleli qembu elisanda kunqoba isicoco seSerie A, kodwa lehluleka lancama ukuqhubekela phambili emqhudelwaneni we-UEFA Champions League. UPirlo (41) owayeyibamba kuthule umoya enkabeni yenkundla kwiJuventus eminyakeniRead More
SIMANGALISO NTSHANGASE IZINGUQUKO zikaPitso Mosimane esiwombeni sesibili somdlalo weSemi-Final eNedbank Cup zize nezithelo ezinhle, njengoba abadlali bakhe abafake kamuva okunguKeletso Makgalwa noLyle Lakay kuyibona abaqinisekise ukuthi iDowns idlulela emidlalweni wamanqamu, emidlalweni enqobe kuwo ngo 3 –Read More